Ukudla kwezinja okulinganisiwe: yikuphi okungcono? | Izinja Umhlaba
Nathi Cerezo | | Ukondla Izinja nemidlwane
Enye yezinto engasenza singabaze ngokwengeziwe lapho sithatha isinqumo sokudla kwezilwane esizifuyile ukuthi yikuphi ukudla okulinganiselayo okungcono. Njengoba kunemikhiqizo nezinhlobo eziningi kangaka ezitholakalayo, kwesinye isikhathi kunzima kakhulu ukukhetha ukudla okuvumelana nezidingo zenja yethu.
Ngalokho, Kulesi sihloko ngokudla okulinganiselwe okuhle kakhulu kwezinja sizozama ukwenza izinto zibe lula kuwe. Sikhethe uhlu olunokudla okungcono kakhulu kwezinja, futhi sikwahlukanise ngezigaba, ukuze ukwazi ukukhetha okukufanele kakhulu. Sincoma nalokhu okunye okuthunyelwe mayelana Ukudla okungcono kwezinja okungu-7.
U-Ownat ngicabanga izinja ...
Phambili Ukudla Kwezilwane ...
1 Okuphakelayo kukonke
1.1 Ukudla okulinganiselwe okuhle kakhulu
2 Okuphakelayo okuqondile
2.1 Kwezokwelapha: wonke umugqa weRoyal Canin Veterinary
2.2 Okwemidlwane: Acana Puppy & Junior
2.3 Kwabadala: u-Orijen Senior
2.4 Izinja zabantu abadala: I-Royal Canin Mini Adult
2.5 Ngezinja ezihlanzwayo: I-Purina ProPlan OptiWeight
3 Ukudla okumanzi: Ikhishi likaLily
4 Ungakukhetha kanjani ukudla okuhle okulinganiselayo
4.2 Ubuhlanga noma usayizi
4.3 Izidingo ezithile
4.4 Ukuthandwa kwenja yakho
4.5 Iseluleko sezilwane
5 Ukudla okumanzi noma okuphakelayo?
5.2 Ukudla okumanzi
6 Ukuthenga kuphi ukudla kwenja okulinganiselayo
Lapho sikhetha inja yethu okuphakelayo noma okulinganiselayo, into yokuqala okufanele siyicabangele ukuthi siyayidinga yini ukuthi ibe ngohlobo oluthile olukhethekile, ngokwesibonelo, esigabeni esithile sokukhula, ukugula ... imakethe Kukhona nokudla okuphakeme kakhulu lokho Zifanele zonke izinja, zazo zonke izinhlobo, osayizi nobudala, ngisho ne-hypoallergenic.
Ukudla okulinganiselwe okuhle kakhulu
Ukudla kwe-ACANA Pacifica ...
I-Acana ingeminye yemikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu emakethe, ngoba izithako zayo zifaka inani elikhulu lenyama entsha noma eluhlaza. Kulokhu, kungumkhiqizo osuselwe kuzinhlanzi (Pacific herring, sardines, hake, rockfish ...), yize noma yikuphi ukuhlukahluka kwe-Acana nakho kunekhwalithi engakholeki, ngakho-ke ungakhetha leyo oyithanda kakhulu. Inja. Okuphakelayo kuka-Acana akuqukethe okungaphansi noma okungaphansi kwengxenye yenyama engama-70%. Lokhu kusho ukuthi ukudla akufuthiswanga ngokolweni, ilayisi noma okunye ukudla "kokugcwalisa" (futhi nakho okungadala ukungezwani komzimba nezinye izinja), kepha kunalokho bayaqinisekisa ukuthi inja yakho ithola wonke amaprotheni ayidingayo.
Lokhu kuhlukahluka Ilungele zonke izinja, kungakhathalekile ukuthi zikhula kangakanani, noma zilawule isisindo noma uma zinokungezwani okuthile nokudla. Okuwukuphela kwephuzu eliphikisana nalokhu okuphakelayo kwekhwalithi ephezulu intengo, ephakeme kakhulu kunesilinganiso.
Njengoba sishilo, Kungenzeka ukuthi udinga okuphakelayo okuthile, okugxile, ngokwesibonelo, eminyakeni yenja yakho, isifo esithile esingavela (njengezifo ezingezwani nomzimba) noma nohlobo lwaso. Lokhu kudla kunokwakheka okujwayele ukuhlangabezana nezidingo ezithile zezinja futhi yingakho zilungile ngokuya ngohlobo lwezimo ukuze zihlale zijabule futhi ziphilile njengakuqala.
Kwezokwelapha: wonke umugqa weRoyal Canin Veterinary
ICANIN ROYAL Ukudla kwe ...
Sikhuluma ngokuhlangenwe nakho kwethu lapho sincoma wonke umugqa weRoyal Canin Veterinary. Kukuphakelwa kwekhwalithi ephezulu kakhulu, futhi, njengoba igama labo likhombisa, kungumugqa wezokwelapha, ogxile kokucacisiwe kudokotela wezilwane wakho. (Okusho ukuthi, gwema ukunikeza inja yakho ukudla kwamathumbu, isibonelo, uma udokotela wezilwane engakuyalelanga). Ngakho-ke, banezinhlobo eziningi zokunikeza inja yakho ukudla okuphelele ngokuya ngezidingo zayo: Ukusutha, ukulawula isisindo; Amathumbu, ngenxa yezinkinga zokugaya ukudla; I-Urinary, yezinkinga zezinso; I-Anallergenic, yokungezwani komzimba; Isifo sikashukela, sezinja zesifo sikashukela ...
ICANIN YOBUKHOSI - Ukudla ...
Futhi, Elinye iphuzu esivuna ukuthi uhlobo olufanayo lunayo yonke inguqulo ngendlela yokuphakelayo noma ukudla okumanzi ukuze ukwazi ukukhetha evumelana nenja yakho. Ukudla okumanzi, yize kungakhululekile kangako ukunikeza, ngokwesibonelo, kuvame ukuheha izinja ngenxa yokuthungwa nokunambitheka kwayo.
Okwemidlwane: Acana Puppy & Junior
Ukudla kwe-ACANA Puppy Junior ...
Sibuyela e-Acana ukuyokhuluma ngokudla kwayo kwemidlwane, ukudla okulinganiselayo okuseqophelweni eliphezulu lokho kuzokwenza ukukhula komdlwane wakho kube kuhle kakhulu. Sesivele sikhulumile kwezinye izikhathi ukuthi izithako abazisebenzisayo e-Acana ziyinyama ngobuningi (nezicucu eziphelele), kulokhu inkukhu yamahhala, kanye namaqanda okunikeza amaprotheni amaningi. Ama-croquette nawo mancane, ngakho-ke akunzima ukuthi izinja ezincane kakhulu zihlafune.
Ekugcineni, Lokhu kuhlukahluka kunconyiwe, ngaphezu kwemidlwane (ebhekwa ngaphezulu noma ngaphansi kwezinyanga eziyisi-7 ubudala) ngezinja ezincane, okungukuthi, intsha (cishe izinyanga eziyi-7 ngonyaka).
Kwabadala: u-Orijen Senior
ORIJEN Senior - Ukudla ...
Olunye uphawu oluphezulu njenge-Acana (empeleni luvela kumkhiqizi ofanayo) kuhle kakhulu kokubili ekunambithekeni nasezintweni. Lokhu kudla okulandelayo kulandela ukudla okuncane kwenkukhu, i-turkey, inhlanzi, amaqanda nemifino, okwenza kube kuhle ezinja ezindala ngenkathi zihle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ama-croquette mancane impela, ngakho-ke awabizi lutho ukuhlafuna.
Iphuzu elibi ukuthi ezinye izibuyekezo ze-Amazon zikhononda ngokuthi kwenze izinja zazo zizwe zimbi, ngakho-ke kunconywa ukuthi, ngaphambi kokushintsha okuphakelayo, ubuze udokotela wezilwane wakho.
Izinja zabantu abadala: I-Royal Canin Mini Adult
IRoyal Canin C-08341 SN ...
Ngaphezu komugqa wezilwane, enye yezinzuzo nezimpawu ezinkulu zeRoyal Canin, omunye wemikhiqizo enconywe kakhulu ngabahlengikazi bezilwane (umsunguli wayengeyena ongenalutho), ukuthi kubonakala sengathi imikhiqizo eguqulelwe kuzo zonke izinhlanga, osayizi, ubudala nezimo. Kumkhiqizo esiwethula lapha, kunikezwa okuphakelayo kwekhwalithi ephezulu yezinja ezindala ezingosayizi abancane.
I-Royal Canin Mini Adult ...
Ingabe ufuna okuningi? Umkhiqizo ofanayo uyatholakala kunguqulo yokudla emanzi uma kwenzeka ufuna ukukuhlanganisa nokuphakelayo noma umane unikeze inja yakho umuthi.
Ngezinja ezihlanzwayo: I-Purina ProPlan OptiWeight
I-Purina ProPlan Bonke Usayizi ...
Akusiyo imfihlo ukuthi Izinja ezinenzalo zivame ukukhuluphala kunalezo ezingekho, ngakho-ke kubalulekile futhi ukukhetha okuphakelayo okuvumelaniswe nezidingo zazo. Le evela ePurina yinhle kakhulu, ngoba yehlisa umuzwa wendlala ngenkathi isiza inja ukwehlisa isisindo ngokuya ngeresiphi yayo emnandi esekwe enkukhu. Ngaphezu kwalokho, yenzelwe zonke izinhlobo kanye nawo wonke amasayizi.
Ukudla okumanzi: Ikhishi likaLily
Ukudla okumanzi kwe ...
Y sigcine ngomunye umkhiqizo oziqhayisa ngokusebenzisa iziqeshana ezinkulu zenyama nenhlanzi ngokulungiselela ukudla kwabo okumanzi, iLily's Kitchen. Yize kubiza impela, ngokusho kwamazwana kubonakala sengathi izinja ziyayithanda ukunambitheka kwayo, noma ngabe iphuzu elibi ukuthi ungathenga kuphela iphakethe elinawo wonke ama-flavour, ngakho-ke uma isilwane sakho singathandi nelilodwa laso, uzoba nalo ukuhlupha.
Ungakukhetha kanjani ukudla okuhle okulinganiselayo
Njengoba ubonile, kunokudla okuningi okulinganiselayo okunekhwalithi ephezulu kakhulu emakethe, ngakho-ke kungaba nzima impela ukukhetha leyo evumelana nenja yakho okuhle kakhulu. Ngakho-ke, kungakuhle ukuthi unake okulandelayo:
Iminyaka yobudala ingenye yezinto zokuqala, uma kungeyona eyokuqala, okufanele uyicabangele lapho ukhetha okuphakelayo kwenja yakho. Izidingo zomdlwane, ngokwesibonelo, azifani nezenja endala, njengalezo zalowo osevele eneminyaka ehlonishwayo. Ukudla okuningi kulungisa indlela ethile yokudla ehlose iminyaka yezinja.
Ubuhlanga noma usayizi
Ubuhlanga noma usayizi futhi Izimpawu zokudla okuthile, okuvame ukuvumelanisa okuqukethwe kwazo nezidingo zohlobo oluthile. Ngakho-ke, ubukhulu buhlobene eduze nobuhlanga, ngoba kuyisici abantu babo abavame ukuhlanganyela ngaso. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo ezithile zinamathuba amaningi okuba nezinkinga ezithile zezempilo ngokuzayo, ngakho-ke ukuzinikeza okuphakelayo okujwayele kuzo kungaba umqondo omuhle kakhulu.
Lolu hlobo lokudla okulinganiselayo kunqunywa udokotela wezilwane. Kuhloselwe lezo zinja ezithintekayo ngesifo esithile. Isibonelo, uma inja iguliswa, okuphakelayo kwe-hypoallergenic kuzoguqulelwa kwizidingo zokudla okunempilo kwezinja ezithintekayo ngenxa yokungezwani komzimba. Okunye okuphakelayo okujwayelekile yilokho okuhlose isifo sikashukela, ukukhuluphala ngokweqile ...
Ukuthandwa kwenja yakho
Okuthandwa yinja yakho zibaluleke kakhulu lapho ukhetha ukudlaNgoba uma ungayidli ngokunethezeka, ungahle ungadli ngokwanele, okusobala ukuthi, okungakunika izinkinga. Kungakho kunconywa kakhulu ukuthi ukhethe ukunambitheka okuthandayo: inhlanzi, inkukhu ...
Okokugcina, ukwelulekwa kwezilwane kubalulekile ukukhetha ukudla okuhle. Sebenzisa uma uthatha inja yakho ukuyohlola (ukuyinika imigomo, ngokwesibonelo) ukubuza udokotela wezilwane ukuthi ngicabanga ukuthi ikweluleka ngani. Ngemuva kwakho konke, ochwepheshe yibo abakulungele kakhulu ukuncoma ukuthi sondleni izilwane zethu.
Ukudla okumanzi noma okuphakelayo?
Okunye ukungabaza okukhulu esibhekana nakho lapho sikhetha ukudla kwenja yethu okungcono kakhulu ukuthi ngabe ukudla okumanzi noma okuphakelayo kungcono. Iqiniso ukuthi ngamunye unezinzuzo nezinkinga zawo:
Ngicabanga ukuthi imvamisa luhlobo lokudla okusetshenziselwa ukuba nempumelelo enkulu. Kukunethezeka kakhulu ukunikela, ngoba kufanele umane ukuwufaka endishini bese ulinda inja ikudle njengokuthanda kwakho. Imvamisa iza ngesigaxa semifantu eyomile ethokozisayo ukuyidla futhi enazo zonke izakhamzimba ezidingekayo, ngaphezu kwalokho, ukuba ukudla okomile kusiza ukuhlanza amazinyo enja nempilo yokugaya ukudla, ngoba kufanele iwahlafune ngaphambi kokukugwinya.
Enye yezingqinamba ezisobala kakhulu kokuphakelayo ukuthi ayiqukethe amanzi amaningi njengokudla okumanzi, lapho kuzodingeka sinake kakhulu ukuze inja yethu idle amanzi ewadingayo.
Ukudla okumanzi Ilungele lezo zinja ezi-fussy kancane uma kuziwa ekudleni, ngoba ukuthungwa kwayo kumnandi ngokwengeziwe futhi ukunambitheka kwayo kuvame ukuba kuhle kakhulu futhi kukhulu kakhulu kunalokho kokuphakelayo. Ngakolunye uhlangothi, enye inzuzo enkulu ukuthi, njengoba inomswakama, iqukethe amanzi amaningi kakhulu kunokondla, okuyi-hydration eyengeziwe.
Nokho, ukudla okumanzi akukhululekile ukuphakela njengoba ngicabanga. Kuzofanele unake ingxenye etholwa yinja (emikhiqizweni eminingi enqunywa isisindo) futhi uqiniseke ukuthi iyidla ngasikhathi sinye ukuze ingoni.
Ukuthenga kuphi ukudla kwenja okulinganiselayo
Kukhona izindawo eziningi ungathola ukudla kwenja okulinganiselayo ngesimo sokuphakelayo nokudla okumanzi, yize okunye kunconyelwa kakhulu kunabanye.
Amazon Akungabazeki ukuthi kungenye yezinketho ezinconyelwa kakhulu, ngoba ivumela izikhwama (imvamisa zinkulu kakhulu futhi zinkulu) ukuthi zifike emnyango wendlu ngokukhululeka konke. Ngaphezu kwalokho, banemikhiqizo nezinhlobo ezingapheli.
En izitolo eziku-inthanethi zezilwane Uzothola nemikhiqizo nezinhlobonhlobo eziningi, ngokungeziwe, ungazizwela mathupha ukuthola izeluleko.
Noma, uma ufuna iseluleko, okuwusizo kakhulu yilokho kwe- odokotela bezilwane, ezoncoma okuphakelayo okuhle kwenja yakho. Ngaphezu kwalokho, iningi linezikhwama ezithengiswayo noma inguqulo yazo ekudleni okumanzi, kusuka kumikhiqizo emihle kakhulu, kanye nezinguqulo ezenzelwe ukwelashwa.
Ekugcineni, Asincomi ukuthi ukhethe noma yikuphi okuphakelayo ongakuthola ezitolo ezinkulu nezitolo ezinkulu, ikakhulukazi uma kuyilebula elimhlophe. Lokhu okuphakelayo akuvamisile ukuba nekhwalithi ephansi edingwa ukudla kwenja yakho.
Ukukhetha ukudla okulinganiselayo kakhulu kwesilwane sethu akuyona i-odyssey, kepha ngenhlanhla singahlala sibuza uchwepheshe wezilwane, ngoba bazokwazi ukuthi bangaseluleka kanjani ngokuhlukahluka okuhle kakhulu kwezidingo zesilwane sethu. Sitshele, ngabe uke wazama okunye kwalokhu okuphakelayo? Ucabangani? Ingabe inja yakho inokudla okuningi okumanzi noma okuphakelayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukondla Izinja nemidlwane » Ukudla kwezinja okulinganisiwe: yikuphi okungcono?